Esikhathini sethu, yokungezwani komzimba - ke iyisici mass, futhi cishe wonke umuntu empilweni yami ke nazo. Lubizwa izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba, futhi iyafika bese imbangela okwamanje ecacile ngokugcwele - ngokomthetho, lokhu kusebenza futhi iningi izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba. njalo kakhulu futhi waba yokungezwani komzimba ezinsaneni: kungaba kokubili ukudla contact, okungenani - othulini noma iphunga. Allergy ezinsaneni kunzima ukuba aphathe, ngisho lingaze, kusukela antihistamine kakhulu zinamandla futhi ngempela sina kuthinte isibindi, futhi ngempumelelo wamafutha engezwani ngokuvamile aqukethe ingxenye hormone, okuyilona elisebenzayo futhi kulonyaka akuyona efiselekayo.
Allergy ezinsaneni ngokuvamile kubonakala njengoba ukuqubuka kwesikhumba ikakhulu ebusweni nangaphansi inabukeni, kodwa ezimweni ezimbi kakhulu kungaholela bonke ubuso umzimba. Futhi kungenzeka ezinzima komzimba ezifana angioedema, ukuhlaselwa isifuba somoya, imfiva, ngisho ukushaqeka anaphylactic. Esewusana, lapho ingane sidla ubisi kuphela, noma inhlanganisela, komzimba imbangela ucishe ecacile - lena yokungezwani komzimba ubisi noma ingxube. Endabeni ibele yokungezwani komzimba engabangela Ukudla ingxenye sikamama, futhi kufanele wenze ezinye umzamo ukuze kubonakale futhi ngaphandle kusukela ekudleni. Nokho, ngezinye izikhathi futhi kwenzeka ukuthi kukhona yokungezwani komzimba ukuze ubisi lukamama, njengoba enjalo, kodwa lezi zimo awatholatholakali futhi ukukhathazeka, ikakhulukazi izindawo zemvelo ezishisayo.
Endabeni yokufakelwa yokudla yokungezwani komzimba ngokusobala kubangela ezinye izingxenye ingxube, kodwa ngaphambi kokuya nezinye ingxube, ungagxambukeli yokungezwani komzimba ukuhlolwa - ngoba ushintsho njalo ingane ukudla kungaba senze isimo sishube. Ngokuvamile, isakhi ezifana kuyinto lactose noma obisi e inkomo moloka- ke uvumelane lactose, soy, futhi unga futhi ubisi ingxube - ngoba amaprotheni isivele khona ngesimo ojiyileyo komzimba futhi awukwazi kubangele: ngokuvamile abantu abaye iguliswa ubisi, kuhambisana kahle yogurt noma yogurt. Empeleni, kuleli cala kubalulekile ukuqeda ubisi cow sika kusukela ekudleni ingane kuze kube yilapho okungenani ngineminyaka emithathu ubudala, kodwa muva nje ngakho batusa ukwenza, ngisho labo abanemizimba ezwelayo is hhayi waphawula. Ngemva kweminyaka engu-komzimba ezintathu usana ngokuvamile phansi, kodwa ngaphansi kombandela wokuthi phambi kwakhe kwakungekho ukuxhumana allergen, ngakho ungacabangi ukuthi yokungezwani komzimba ezinsaneni ngempela uye waba mdala ngisho noma uhlala emva kweminyaka emithathu, kungenzeka ukuthi, esikhathini Ubusha umntanakhe "outgrow".
Akubalulekile ngesikhathi bevela okokuqala wosana izihlathi ukuqubuka ngokushesha kwisi ku yezokwelapha lenhlanganisela hypoallergenic: kuphathelene kuphela udokotela kanye kuphela ngesisekelo ukuhlolwa laboratory, ngoba abazi ngempela ukunikeza ukudla okwanele futhi sokugcina uma zonke ezinye izinto ongazicabanga ziye zazanywa . Kungenzeka ukuthi kwanele ukusebenzisa amasi noma i-lactose-free ingxube, kanye yokungezwani komzimba ngeke emuva - kodwa usadinga ukuthi bahlolele komzimba. Ibubulo lokususa i-efanayo ezinjalo kukodwa allergen, futhi kwathatha Izingxube ezinjalo kungenzeka kuphela uma kwenqatshwa ephelele ubisi ngokomthetho.
Kungani kukhona yokungezwani komzimba ezinsaneni? Lo mbuzo uvuliwe, ngoba odokotela namanje abaziwa imbangela yokungezwani komzimba ngokwawo. I mbono othandwayo kakhulu wukuthi yokungezwani komzimba livela isimo inzalo ngokweqile ngenxa ukucindezeleka esanele izivikeli mzimba, okumele usazoba okuthile "umsebenzi". Lokhu kuchaza yokuthi iningi yokungezwani komzimba abanale nkinga - abahlala emadolobheni, kanye nenombolo yabo kokukhulumela ukuthuthukiswa izinzuzo impucuko. Lokhu akusho ukuthi udinga ukuba izitike ezinjengendle futhi sloppiness - esandleni ukugeza kusadingeka, kodwa isifiso ngokweqile ukuhlanzeka ngokuphelele nge abilayo esisemqoka kanye ironed bonke babe kulimaza njengokungenisa nokuntuleka kokukhucululwa kwendle: i umthwalo ezanele esimisweni sokuzivikela, cishe, ezidingekayo.
Le mpi for ubuqhawe: iyini ulimi enhle kakhulu
Kuthiwani uma indoda ephatha kabi umkakhe nezingane zakhe
Inani ubuthongo futhi imiphumela yokuntuleka
Okwakushiwo igama Laila kweqiniso